Pornography iyo Dareenada Galmada | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Nagu saabsan Pornography iyo Dhibaatooyinka Galmada
TRF waxay soo bandhigeysaa RCGP Tababarka Aqoonsiga
Haddii aad rabto inaad wax badan ka barato saameynta sawir-gacmeedka internetka iyo dhibaatooyinka galmada, kaalay aqoon-isweydaarsiga isla magaca. Waxaa la aqoonsan yahay Kuliyada Boqortooyada ee Dhaqaatiirta Guud. Aqoon isweydaarsigu wuxuu u qalmaa 7 dhibco CPD oo loogu talagalay aqoon isweydaarsiga maalinta oo dhan ah iyo 4 dhibco nooca maalinlaha ah. Waxaa laga heli karaa UK iyo Jamhuuriyadda Ireland. Fadlan kala soo xiriir anaga haddii aad rabto inaad waxbadan ka maqasho aqoon isweydaarsiyada mustaqbalka ama aad xaflad ka abaabusho aaggaaga Waxaan hada bixinay tababarkan in kabadan 20 jeer.
Bixinta aqoon isweydaarsigan ayaa hakad la galiyay inta uu socday fiditaanka cudurka Covid.
Intaa ka badan isticmaalka filimada internetka ayaa si dhakhso ah u soo baxaya sida dhibaatada dhaqanka jinsiga. Tani waxay u dhigantaa isticmaalka telefoonada casriga ah iyo si sahal ah u helista fiidiyowga sanadihii hore ee 10. Arimo badan oo ka mid ah arrimaha caafimaadka maskaxda iyo jidheed ayaa soo baxday. Tusaale ahaan, korodh xooggan oo ku yimaada xoqitaanka erectile ee ragga dhalinyarada ah, caddayn ballaaran oo ku saabsan qanacsanaanta jinsiga ee ragga iyo dumarka, iyo walaac badan oo bulsho iyo jidh-dilka jirka ee dhalinyarada oo dhan waxay u muuqdaan inay la xidhiidhaan dhacdadan dhaqameed.
Xirfadleyda daryeelka caafimaadku waxay u baahan yihiin inay ka feejignaadaan caddeynta taageerta habka balwadda. Hadda waxaa jira ikhtiyaarro daaweyn oo wax ku ool ah iyo daaweynno xoojinaya soo kabashada oo ay ku jiraan qorista bulshada oo wax ku ool ah
Aqoon-isweydaarsigan ayaa ku siinaya hordhac u ah qabatinka neerfayaasha guud ahaan iyo isticmaalka qaawan ee internetka khaasatan, kuna saleysan cilmibaadhista ugu dambeysay. Waxay eegi doontaa noocyo kala duwan oo caafimaad jir ahaaneed iyo xaalado caafimaad maskaxeed oo laxiriira isticmaalka khaniisiinta ee ka soo baxa cilmi baarista. Waxaan dhiiri galin doonaa wada hadalada milicsiga ee ka dhexeeya xirfadleyda kuna saabsan waxqabadka ugu wanaagsan, hormarinta suurta galka ah, iyo xulashooyinka dib u soo kabashada.
Aqoon isweydaarsi maalinle ah oo kusaabsan Filimka Jinsiga iyo Galmada
Hadda ma hayno aqoon-isweydaarsiyo maalin dhan soconaya oo loo qorsheeyay cudurka faafa ee Coronavirus, laakiin waxaan u furannahay soo-jeedimaha goorta iyo goobta aad jeceshahay inaad ku yeelato.
09.00 - Hordhac sawir-gacmeedka qaawan ee internetka, Tijaabada Porn-ka Weyn, Qeexitaanka Ururka Caafimaadka Adduunka ee caafimaadka galmada, ICD-11 iyo khalkhalka dabeecadda galmada ee qasabka ah, moodooyinka balwadaha iyo moodooyinka maskaxda, qaababka habdhaqanka isticmaaleyaasha iyo kor u qaadista waxyaabaha xoogga leh
10.30 - Fasax
10.45 - Isticmaalka sawir-gacmeedka iyo khataraha - saameynta caafimaadka maskaxda iyo jirka, oo ay ku jiraan dhibaatooyinka galmada ee dhalinyarada, ragga iyo haweenka. Wadahadal kooxeed yar, weydiinaya macaamiisha adeegsiga sawir-gacmeedkooda, ka dib wada hadal kooxeed oo dhan. Qaababka isticmaalka qaan-gaarka, qaboojinta galmada, qaababka beddelaadda habdhaqanka galmada ee bulshada dhexdeeda, arrimaha caafimaadka maskaxda, xadgudubka galmada ee cunugga ka dhanka ah, dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada iyo doorka qaawan ee rabshadaha guriga. Kulan & Su'aalo.
13.00 - Qado
14.00 - Isticmaalka sawir-gacmeedka iyo arrimaha kala duwanaanta galmada, tijaabinta dhibaatooyinka isticmaalaha iyo bixinta ilo lagu taageerayo adkeysiga. Pornography oo ah arrin qaab nololeed ah oo ka jirta LGBTQI + iyo bulshooyinka MSM, jahwareer, kiimiko, xulashooyinka daaweynta, Dhibaatada Filimada ee Isticmaalka Iskeelka, bulshooyinka ka soo kabashada internetka iyo qoritaanka bulshada. Wadahadal kooxeed.
15.15 - Fasax
15.30 - Soo kabashada iyo kahortaga - Immisa porno ayaa aad u badan? Daaweynta iyo xulashooyinka waxbarasho, balwadda, ka noqoshada, 'fidinta', maskaxda, CBT iyo daweynta daroogada. Waxaan ku dhammeyneynaa dhisida fahamka filimada qaawan ee internetka oo ku saabsan habka daaweyntaada.
16.20 - Qiimeyn iyo xirid.
Mary Sharpe waa aasaasaha iyo Madaxa Fulinta ee hay'adda samafalka waxbarashada Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka. Waxay soo bandhigeysay saameynta sawirrada qaawan ee internet-ka ay ku leedahay xirfadleyda daryeelka caafimaadka, caddaaladda dembiyada iyo waxbarashada iyo dugsiyada sannadihii 5 ee la soo dhaafay. Maryan waxay xubin ka ahayd Golaha Bulshada ee Horumarinta Caafimaadka Galmada ee USA laga bilaabo 2016 illaa 2019.
Mary waxay ku saleysneyd Jaamacadda Cambridge muddo toban sano ah. Halkaas ayay cilmi baaris ugu sameysay barnaamijka sayniska ee nabada iyo amniga ee NATO. Waxay ahayd wariye saynis oo ka tirsan Machadka Cambridge-MIT. Tani waxay ahayd shaqo ay hore uga qabatay Komishanka Yurub ee Brussels. Waxay sidoo kale ku tababartay ardayda iyo shaqaalaha sii wadida waxqabadka ugu sarreeya iyada oo loo marayo aqoon isweydaarsiyo ku saabsan xirfadaha nolosha iyo maaraynta culeyska. Sanadkii 2020 Mary waxay ku laabatay Jaamacadda Cambridge iyada oo noqotay Aqoonyahan Booqasho ah oo ka tirsan Kuliyadda Lucy Cavendish. Maryan waxay ku shaqeysay sharciga qareen ahaan iyo u doodaya muddo ka badan 15 sano. Waxay ku daabacday dhinacyo badan oo caafimaadka, galmada iyo sharciga ah waxayna kaga hadashay shirarka adduunka oo dhan. Waxay ku raaxeysataa waxbaris iyo wada hadal fool ka fool ah. Taariikh nololeed faahfaahsan oo Maryan ah ayaa la heli karaa halkan.
Darryl Mead PhD waa khabiir ku xeel dheer arrimaha internet-ka iyo cilmi-baare ku takhasusay soo-saarista filimada. Doorkiisa Guddoomiyaha Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta wuxuu diiradda saarayaa saameynta isticmaalka filimada qaawan ee ku saabsan dabeecadaha dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Darryl wuxuu horumarinayaa jawaabaha siyaasadeed ee halista ah ee caqabadaha caafimaad ee ay abuureen aqbalida baahsan ee filimada sawir qaadashada oo ah ifafaale madadaalo ballaaran. Aniga oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Maktabada Qaranka ee Iskotland, Darryl wuxuu gacan ka gaystay aasaasida nidaamka Uk ay u isticmaasho keydinta internetka. Macallin tababbaran, wuxuu qabtay doorar hore oo ah xiriiriyaha cilmiga sayniska waana xirfadle macluumaad xareysan (FCLIP).
Waxweydiinta? Su'aalo kale? Fadlan la soo xiriir Hay'adda Reward Foundation by email: info@rewardfoundation.org ama mobile: 07506475204.